27% nke ndị na-ere ahịa enweghị atụmatụ mbadamba ... Ma! | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 27, 2012 Douglas Karr
Anyị hụrụ n'anya inwe nnukwu onye nkwado dịka Zoomerang na ndị ha free ntuli aka software iji chọpụta ihe na otú ndị ahịa na-eche ma ọdịnaya anyị dị na ya na inye nghọta banyere atụmatụ dị iche iche na-etinye. Nnyocha anyị mere ọhụrụ jụrụ banyere atụmatụ maka ndị na-ere ahịa mgbe ọ bịara n'ahịa mbadamba.
N'afọ gara aga, Forrester buru amụma nnukwu ibu na ereader na mbadamba ahịa - na ahịa mepụtara. Ọ baghị ahịa dị mfe, mana mbelata iwe ike nke ndị na-anụ ihe na mbadamba na-eme ha ọnụ karịa ekwentị!
Kedu ihe nke ahụ pụtara maka nzukọ gị? Obi dị m ụtọ, ihe dị ka 50% nke ndị na-ege anyị ntị kwuru na ha na-eme atụmatụ na njikarịcha saịtị ha maka iji mbadamba…. mana ihe ijuanya 27% kwuru na ha enweghị atụmatụ ma ọlị!
Aga m eme amụma banyere ndị ahụ here Ndị na-agụ akwụkwọ na mbadamba nkume nwere ike inye ahụmịhe ọgụgụ ọgụgụ pụrụ iche nke nkezi weebụsaịtị enweghị ike ịmepụta. A na-ahapụ ngwa ngwa akpaaka maka ibipụta akwụkwọ, ọbá akwụkwọ njikarịcha mbadamba mbadamba na isiokwu CMS na oke ọnụego, yana webụsaịtị na-anabata (nke kwekọrọ nha ihuenyo mbadamba) na-eme ka ndụ dịrị ndị na-emepụta ihe mfe.